आँखाका केही समस्या र हेरचाहा गर्ने तरिका - ज्ञानविज्ञान
आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो जुन दृष्टिको काममा आँउछ। मानव शरीरमा दुई आँखा हुन्छन्। यो दुईटै आँखा खोपडीको अर्बिटमा अवस्थित हुन्छन्।
आँखाका केही समस्या यस्ता छन्ः
1.कन्जन्टिभाइटिस अर्थात आँखा पाक्ने रोग
2.स्टाई अर्थात् आनो
3.आँखा सुख्खा हुने
आँखाको दृष्टि कसरी जोगाउने ? यस्ता छन् ७ उपाय
५. सिनेमा टि.भीः
अत्यन्त चक्किलो प्रकाशमा सस्तो र गुणस्तरहीन चस्मा लगाउनुहुन्न किनभने यसले आँखालर्य असर पु¥याउँछ । राम्रो गुणस्तरको चस्मा मात्र प्रयाृेग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटै एर्व निरन्तरको चस्मा लगाइ आँखाको लागी हानिकारक हुन्छ । आँखाको लागि प्राकृतिक प्रकाश आवश्यक र लाभदायक हुन्छ । दिन–रात चस्मा लगाउनु आँखाको लागि हानिकारक मानिन्छ । त्यसबाहेक आँखाको सहन शक्ति पनि घट्न जान्छ । कमजोर आँखा विभिन्न रोगहरुको शिकार बन्दछ । यस्तो आँखामा प्रकाश प्रति संबेदनशील र सुख्खा हुन्छ ।
Don't Miss it केक खाँदा शरिरमा आइपर्छ यस्ता समस्या
Up Next यस्ता छन्, फिटकिरीका ९ फाइदा
जाडोमा ओठको सुरक्षा कसरी गर्ने ? जान्नुहोस
१. गुलाफका ताजा पातहरूलाई पिँधेर त्यसमा ग्लिसरिन मिसाउनुस् र लिपस्टिकको साटो ओठमा यो लगाउन थाल्नुस् । यसो गर्दा ओठ फाटेको…
शरीरलाई लाभ पार्ने खानपान, यस्ता छन्
मानिसले सबै भन्दा बिशेष ध्यान आफ्नो शरीरलाइ दिनु पर्छ । स्वास्थ नै मानिसको ठुलो धन हो । यसका लागि हामीले बुझ्नु पर्छ…
तीते करेला तितो तरकारी मात्र होइन यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा मिठो फाइदा पनि दिन्छ जान्नुहोस्
तितो अनि व्लड प्रेसर लो भएकाले धेरै खान नहुने हामीले तरकारीको रुपामा प्रयोग गर्ने फलनै तिते करेला हो । यस्ता…
छिनछिनमा पिसाव लागिरहन्छ ? थैलीमा सङ्क्रमण अथवा मृगौलाको पत्थरी त भएको छैन ? जान्नुहोस्
मानिसहरु पिसाब लागी रहन्छ भनेर त्यति पानी पिउने नै गर्दैनन् । तर पिसाब लागे पनि पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागी एकदमै…
कपडा पुरानो र कमजोर हुनबाट कसरी बचाउने ? यस्ता छन् उपाय
अब लाज ढाक्ने बस्त्र मात्र रहेन पहिरन । बर्तमान समाजमा पहिरन मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जाडो वा गर्मीबाट बचाउने सुरक्षा कवच…
छन् यस्ता कारण छाला चाउरी पर्ने, यसबाट बच्न उपयोगी खानेकुरा
यी सबैले चाउरीपना लुकाउन तत्कालका लागि केही मात्रामा सघाए पनि गहिराइसम्म गएर समस्या निर्मूल पार्न सक्दैनन् । किनभने यसको मुख्य…